« Nozarina tamin’ny lalan-diso » -
AccueilTresaka« Nozarina tamin’ny lalan-diso »
« Nozarina tamin’ny lalan-diso »
14/06/2018 admintriatra Tresaka 0
Isaina amin’ny rantsan-tanana ny tokantrano mba hanangan-tsaina amin’izao ankatoky ny fanamarihana ny fetim-pirenena izao. Tamin’ny andro taloha anefa, vao migadona ny volana jona, dia tsy andrin’ny olona ny hamoahana ny sainam-pirenena eo an-davarangany. Tsapan’ny rehetra ny maha sarobidy izany fihetsika izany.
Tsy tia tanindrazana àry ve ny olom-pirenena ankehitriny ka tsy miraharaha ny fananganan-tsaina ? Nozarina tamin’ny lalan-diso ny ankamaroan’ny olona teto an-drenivohitra ka rehefa aty aoriana, dia lasa fomba fanao ny tsy rototra amin’ny fananganan-tsaina na dia tokony hataony aza izany ho fanamarihana ny fahazoana fahaleovantena. Nisy fotoana teto, noho ny antony politika, dia nentanina ny olona tsy hanangan-tsaina.
Zava-doza eto ambonin’ny tany izany tondroin’ny olona molotra hoe tsy manan-tsaina izany. Ny fanajana ny sainam-pirenana dia ampy hitarafana ilay firenena vanona na tsia. Manana andraikitra lehibe amin’izao fahaverezan-kasin’ny sainam-pirenena izao ny mpanao politika, ka anjara andraikiny ny famerenana izany hasina izany.
Mitaraina noho ny fanjakazakan’ny vahiny izy ireo rehefa tsy mahazo toerana politika sy seza. Mitaraina ho tsy afa-manoatra amin’ny tsindry samihafa ataon’ny vahiny. Izy ireo ihany anefa no fototra mahatonga ny vahiny hahazo laka. Lesoka lehibe miandry izay mpitondra vaovao ho avy eo ny fanarenana ny hasin’ny Repoblika, izay voahitsakitsaka hatramin’izay, ka lehibe indrindra amin’izany ny famerenana ny hasin’ny sainam-pirenena.
Raha tsy notezain’ny mpanao politika tamin’ny lalan-diso ny vahoaka, tsy noterena vao hanangan-tsaina. Io toe-tsaina ratsy tafalentika any an-tsain’ny besinimaro io no ampy handrefesana fa mila olom-baovao afaka mijery izany lesoka izany ny Malagasy. Mbola toe-tsaina fotsiny aza izany no voaresaka fa mbola horesahina manaraka eto ny fahavoazana maro amin’ny lafin’ny maro navelan’ireo mpanao politika.
Maro ireo liana sy mametraka fanontaniana amin’ireo dian’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, any ivelany. Nitondra fanazavana ny tenany ary nambarany fa tsy fitsangatsanganana sanatriavina ny alehany any fa fijerena izay hahasoa ny firenena Malagasy. “Mbola maro ...Tohiny
Andry Rajoelina : Nanangana « hospice »